Mafampana ny ao Toamasina Miala any ny hetsi-panoherana ny voka-pifidianana…
Namaky bantsilana ireo tsy tomombana sy hala-bato nataon`ireo izay voalaza fa ho kandidàm-panjakana ny fivondronan`ireo kandidà ho depiote ao Toamasina.
Efa hitan`izy ireo tany amin`ny fampielezan-kevitra ny tsy fanarahan-dalàna ary nitohy hatramin`ny fanodinkodinana ny vaton`ny vahoaka, hoy Rakotomalala Henri na Riri Be, kandidà depiote tao Toamasina. Taorian`ny fifidianana vao fantatra fa nisy fanamboarana lisi-pifidianana miainga avy amin`ny asa tana maro (HIMO) izay nokarakarain`ny FID. Natao isaky ny fokontany izy io ka nalaina avy tany ny lisitra ary nampidirina ireo olona tao anatin`ilay asa tanamaro. Ny sefo-pokontany no miara-miasa amin`ny CENI ka ity farany no namoaka ny lisi-pifidianana. Betsaka ny olona no soloina ka izany no nahatonga ny 60%-n`ny mponina tao Toamasina tsy tafiditra tao anatin`ny lisi-pifidianana. Nandritra ny fifidianana ihany koa dia nisy hatrany fividianana safidim-bahoaka, hoy i Riribe. Alaina sary ny vato harotsaka ao anaty trano fisainana saingy efa misy olona manome roa alina amin`izay mifidy kandidàm-panjakana rehefa any ivelany. Tsy hanaiky lembenana ny kandidà ary hitondra ny raharaha eny amin`ny HCC. Hisy fitoriana amin`ny tenany manokana ary hisy ihany koa ny fitoriana hitambarana. Tanjona ny hanafoanana ny fifidianana solombavambahoaka tao Toamasina farany teo ary hamerenana izany madio tsara.